मैनीक्योर सेट - प्रत्येक चीज के हो? | बेजिया
मैनीक्योर सेट - प्रत्येक चीज केको लागि हो?
सुसाना Godoy | 20/06/2022 10:06 | सुन्दरता
हामी हाम्रा हातहरू सधैं सफा राख्न चाहन्छौं, किनभने तिनीहरू पनि सामान्यतया हाम्रो बारेमा धेरै कुरा बोल्छन्। तसर्थ, यदि तपाईं विभिन्न प्रकारका डिजाइन र रंगहरू प्रयोग गर्नेहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ भने, यो समयको बारेमा कुरा गर्ने समय हो। मैनीक्योर सेट। के तपाईलाई थाहा छ यसको प्रत्येक उपकरण केका लागि हो?
किनकी यो पहिलो पटक होइन कि हामीले एक किनेका छौं मैनीक्योर सेट र हामी सोच्छौं कि यो सबै हामीले समान खेल पाउनेछैनौं। त्यसोभए आफैलाई अगाडि बढाउनु अघि, यो सधैं जान्न राम्रो हुन्छ कि यो बनाइएको प्रत्येक टुक्रा के को लागी प्रयोग गर्न गइरहेको छ र पक्कै पनि त्यसपछि हामी दोब्बर भन्दा बढी रमाइलो गर्न सक्षम हुनेछौं।
1 मैनीक्योर सेट: नेल पॉलिश
2 क्यूटिकल पुशर उपकरण
3 क्युटिकल निपर र कैंची
4 नङ निप्परहरू
5 फर चक्कु
6 संयुक्त उपकरण
मैनीक्योर सेट: नेल पॉलिश
हामीले प्राय: हरेक मैनीक्योर सेटमा फेला पार्ने उपकरणहरू मध्ये एक यो हो। यसको शीर्षमा त्रिकोणीय आकार छ र यो सत्य हो कि हामी सधैं यो के को लागी हो थाहा छैन, तर हामी तपाईलाई यो नङ सफा गर्न को लागी हो भनेर बताउनेछौं। किनभने तिनीहरूलाई काट्ने वा फाइल गरेपछि, तिनीहरूको मुनि केही फोहोर जम्मा हुन सक्छ र यो उपकरणसँग यसलाई हटाउने उत्तम तरिका छ। के तपाइँ यसलाई अक्सर प्रयोग गर्नुहुन्छ?
क्यूटिकल पुशर उपकरण
किनभने हामीले सधैं नङको क्युटिकल काट्नु हुँदैन। त्यहाँ धेरै अवसरहरू छन् जब हामी मैनीक्योर लिन गएका छौं र हामी हेर्छौं कि सौन्दर्य केन्द्रहरू कसरी छन् यसलाई नहटाई क्यूटिकललाई धकेल्ने उपकरण। यो गर्नको लागि, तपाईंलाई उपकरण चाहिन्छ जुन स्प्याटुला वा चम्मच आकार छ, शीर्षमा गोलाकार। त्यसैले क्यूटिकल हटाइनेछ, विशेष गरी जब यो क्षेत्र एकदम कडा छ। अब यो हाम्रो मैनीक्योरको साथ सुरु गर्ने समय हुनेछ!
क्युटिकल निपर र कैंची
साथै cuticles को लागी हामीसँग दुई मुख्य उपकरण हुनेछ। एक तर्फ, कैंची, जो तीखो र उत्कृष्ट टिप्स, साथै घुमाउरो फिनिशको साथ हुनेछ। निस्सन्देह, केवल तिनीहरूलाई हेरेर, हामी पहिले नै सामान्य कैंची संग भिन्नता याद गर्नेछौं। किनभने यी पातलो छन् त्यसैले तिनीहरू केवल क्यूटिकलहरू काट्नका लागि हुन्। जबकि चिमटाले पनि कैंची जस्तै कार्य गर्दछ, तर धेरै तिखो किनारको साथ भनिएको छाला काट्न सक्षम हुन।
निस्सन्देह, यदि हामी क्युटिकल निप्परहरूको बारेमा कुरा गर्छौं भने, हामी नेल निप्परहरू पनि पछाडि छोडियोस् भन्ने चाहँदैनौं। तिनीहरू काट्न सक्षम हुन र नङहरू आकार दिनको लागि उपयुक्त छन्। तर दुबै हात र खुट्टामा ती बाक्लो नङहरूका लागि लक्षित छन्। त्यसोभए, उपचार गरिनु पर्ने क्षेत्रलाई नोक्सान नगर्नको लागि, याद गर्नुहोस् कि यो केवल यस अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ जब त्यहाँ घना नेल आकारको क्षेत्र हुन्छ जुन कैंचीले काट्न सकिँदैन।
त्यहाँ अर्को उपकरण छ जुन हामीले धेरै प्रयोग नगर्न सक्छौं, यद्यपि केही अवस्थामा यो आधारभूत हुनेछ। जब हामीसँग केही छाला हुन्छ जुन नेल क्षेत्रबाट केही हदसम्म अलग हुन्छ, हामी यो चक्कु प्रयोग गर्नेछौं। यद्यपि यो चक्कु जस्तो आकारको छैन जुन हामीलाई थाहा छ। बारेमा एउटा टाउको जसमा राम्रो ब्लेड छ, समतल कंघी जस्तो आकारको। यसलाई पास गरेर, हामी ती छालाहरू हटाउने छौं जुन पहिले नै छुट्याइएको छ, धेरै समस्या बिना। कहिलेकाहीँ, मैनीक्योर सेट भित्र हामी अर्को समान भेट्टाउँछौं तर त्यो 'V' आकार छ। तिनीहरू दुवैको कार्य एउटै छ।
कहिलेकाहीँ हामी पनि कसरी हेर्छौं एउटै उपकरणको डबल टाउको छ, केवल एक को सट्टा। तर यसमा अचम्म मान्नु पर्ने केही छैन किनभने हामीले टिप्पणी गरेका केहीको जस्तै यसको उद्देश्य पनि हुनेछ। त्यो हो, त्यहाँ एक हुन सक्छ जसले नङ सफा गर्छ र एकै समयमा क्यूटिकल धकेल्छ। त्यसोभए केवल यो उपकरणको साथ, हामी एकै पटक दुई काम गर्न सक्छौं।
यो नभन्दै जान्छ कि नेल फाइलहरू मैनीक्योर सेटमा पनि देखा पर्नेछ, जुन हामी सबैलाई राम्ररी थाहा छ, साथै चिमटी र नेल क्लिपरहरू पनि।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » मैनीक्योर सेट - प्रत्येक चीज केको लागि हो?